राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १० बर्षपछि बार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारीमा - Aathikbazarnews.com राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १० बर्षपछि बार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारीमा -
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी १० बर्षपछि बार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारीमा
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १० बर्षको बार्षिक साधारण गर्ने तयारी गरेको छ । करिब १ दशकको वार्षिक साधारणसभा गर्न बाँकि रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले साधारण सभा बोलाउने तयारी गरेको हो ।
कम्पनीले निरन्तर बार्षिक साधारण सभा नगरेर ३–४ बर्षको एकै पटक गर्ने गरेको छ । कम्पनीले २०७४ सालामा २०६०–०६१ देखि २०६२–०६३ को र २०७५ सालमा २०६२–०६३ देखि २०६७–०६८ सम्मको वार्षिक साधारणसभा एकैपटक गरेको थियो ।
कम्पनीका अनुसार वार्षिक साधारणसभा गर्न महालेखा परीक्षकबाट आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ सम्मको लेखापरीक्षण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले दसैँ अगावै बार्षिक साधारण सभा गर्ने तयारीमा रहेको छ । लेखापरीक्षणका आधारमा सेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका सेयरधनीले लाभांश पाउनका लागी सबै आर्थिक बर्षको लेखापरिक्षण प्रतिवेदा पेशगरेपछि मात्रै वितरण गर्न पाउनेछ । बाँकी लेखापरिक्षण अवको ३ महिना भित्रमा पेश गर्ने लक्ष रहेपनि कोरोना महामारीले रोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सका सिइओ शाहको विदाइ
एशियन लाइफका लगानीकर्ताको दुई वर्षदेखि हात खाली १० प्रतिशत संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने !
सूर्या लाइफको सहयोगमा नेपालीले बनाए गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड
‘नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना’
ज्योति लाईफद्वारा २० लाख रुपैयाँ मृत्यु दावी भुक्तानी
अख्तियारद्वारा मनोज भेटवाल पक्राउ
आइपिओ निष्काशनको तयारीमा रहेको डिसहोमले किन्यो प्रभु टिभी
मुक्तिनाथ विकास बैंकले भारी छुटमा कर्जा दिने
काठमाडौंमा भेटिए कोरोना संक्रमित बिरामी
नेपाली कांग्रेसको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला फेरि चर्चामा
सरकारलाई चालु खर्च धान्न कठिन..?
मिटर ब्याजमा पैसा ऋणमा लगाउने पक्राउ